Moto Z3 Ciyaar: Tilmaamo, qiimo iyo soo bandhig rasmi ah | Androidsis
Toddobaadyo xan ah ka dib, maalintii ayaa ugu dambayntii timid. Motorola waxay si rasmi ah u soo bandhigtay Moto Z3 Play. Taleefanka ayaa dhowr jeer usii dillaacday toddobaadyadan oo dhan, ugu dambayntiina waan garan karnaa. Dhex-dhexaad cusub oo doonaya inuu cusboonaysiiyo qaybtan sumadda. Waxay ku sameysaa naqshad cusub iyo shaashad ballaaran.
Tan iyo markii Moto Z3 Play uu noo keenayo shaashad 6-inji SUPERAMOLED ah. Waxyaabaha aan caadiga ahayn inta udhaxeysa. Intaa waxaa dheer, Motorola wuxuu sii wadaa inuu si xoog leh ugu sharaddeeyo MotoMods, modules u muuqda inay sii wadaan in laga sii jeclaado suuqa.
Thanks to qalabkan taleefanka ayaa ku guuleysan doona xagga batteriga, tayada sawirada ama isku xirnaanta. Wax walba oo aad u baahan tahay si aad uga faa'iideysato Moto Z3 Play. Waxaan marka hore kaaga tagaynaa adiga qeexitaan buuxa oo ah qaybta dhexe ee Motorola.
1 Tilmaamaha Moto Z3 Play
Tilmaamaha Moto Z3 Play
Waxaan wajahaynaa dhexdhexaad dhexdhexaad ah iyo intaas si fiican buu ula kulmaa marka la eego qeexitaannada. In kasta oo aysan noqon doonin taleefan gebi ahaanba jabaya waxa qofku ka helo baaxadda sare. Kuwani waa qeexitaannada Moto Z3 Play:
Screen: 6,01 inji SuperAMOLED leh FullHD + xal iyo 18: 9 saamiga, Gorilla Glass 3, 2.5D
GacaliyeQalabka: Qualcomm Snapdragon 636
Kaydinta Gudaha: 32/64 GB (Kordhinta microSD)
Batariga: 3.000 mAh + lacag deg deg ah
Cámara trasera: Dual 12 + 5 MP oo leh fur f / 1.7, PDAF, Dual LED flash, 4K video
Kaameradda hore: 8MP leh fur f / 2.0, 84º
Cabbirada: 156.5 x 76.5 x 6.75 mm
Peso: 156 garaam
kuwa kale: Furitaanka wajiga, akhristaha faraha, USB Type-C, p2i buufin u adkaysta
Naqshadeynta Moto Z3 Play ayaa suuragal ah inay tahay muuqaalka soo jiita inta badan dareenka dadka isticmaala. Kaliya maahan sababta oo ah shirkadda ayaa dooratay shaashad ballaaran oo taleefanka ah, laakiin sidoo kale dhumucdeeda darteed. Sababtoo ah waa taleefan runtii dhuuban, aad u khafiifsan oo sax ah. Shaqo muhiim ah oo ay shirkaddu ka qabto arrintan.
Akhristaha faraha ayaa ku yaalay mid ka mid ah dhinacyada taleefanka. Sababta ayaa ah si ikhtiyaarkan aanu u lumin marka la isticmaalayo qalabka sida modules. Marka, isticmaaleyaashu waxay awoodi doonaan inay sii wadaan isticmaalka astaantan markasta. Intaa waxaa dheer, qalabku wuxuu adeegsanayaa aqoonsiga wajiga, oo sii wadaya helitaanka joogitaanka suuqa.
Sidii la filayay, Moto Mods ayaa sii wadaya inay door muhiim ah ka ciyaaraan alaabada astaanta. Sidoo kale kiiska Moto Z3 Play, kaas oo iyaga la jaan qaadi kara. Iyaga dhexdooda waxaan ka helnaa qaar sida Moto Stereo Speaker, oo doonaya inuu hagaajiyo codka ama Moto Power Pack, oo kordhiya batteriga illaa 40 saacadood oo muddada ah.
Inkastoo xilligan lama filayo inay jiri doonaan qaybo ka mid ah moodeelladaas gaarka ah. Sababtoo ah sababtoo ah moodooyinka kale ayaa imaan doona noocyadan, sida Z3, oo noqon doona kuwa yeelan doona door weyn. Marka ugu dhakhsaha badan waxaan ogaan doonaa qalab dheeri ah oo ku saabsan arrintan.
Ciyaartan Moto Z3 ayaa hadda laga heli karaa Brazil. Dalka gudihiisa waxaa lagu heli karaa qiimo dhan 2.299 reais oo reer Brazil ah, taas oo qiyaastii ah 510 euro sarrif ahaan. In kasta oo ay u muuqato in marka laga hadlayo bilaabashadeeda Yurub ay sii joogi doonto qiyaastii 499 euro. Laakiin tan wali lama xaqiijin. Marka waxaan rajeyneynaa inaan waxbadan ogaan doono dhowaan.
Astaantu ma sheegin wax ku saabsan bilaabashadeeda caalamiga ah. Waxaa la filayaa in la bilaabo toddobaadyada soo socda., laakiin ma hayno taariikh cayiman weli. Waxaan rajeyneynaa inaan si dhakhso leh wax uga ogaanno.
Batariga Moto Mod ayaa horay loogu soo daray qiimaha taleefanka, markaa waxay u badan tahay in haddii taleefanka si shaqsi ah loo iibiyo, qiimaha uu xoogaa ka yaraanayo. Intaa waxaa dheer, waxaa la muujiyey in markii la daahfurayo Yurub, oo ay tahay inay dhacdo xagaagan, ay sidoo kale la imaan doonto Moto Power Pack.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Moto Z3 Ciyaar: Motorola's dhex dhexaad cusub
Sharafta Ciyaarta iyo Sharafta 9i: labada mobiles ee ciyaaraha cusub ee shirkadda leh GPU Turbo